Ihempe yehempe ihempe ihempe ihempe ihempe ihempe Lebang
Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ihempe ihempe PS002
Injongo yethu ephambili kukutshintsha umbono wabantu kunye nendlela abazijonga ngayo izinto kubomi bemihla ngemihla nakwihlabathi ngokwalo. Sijonge ukukwenza oko ngokutyhala umyalezo olungileyo ecaleni kwexesha ngalinye lempahla esikhululayo. Ngokuphathelele ihempe yejezi, kulula ukuba yi-O-neck sleeve ende, sizama ukuyenza yahluke ngoshicilelo olwahlukileyo, olunomdla kakhulu, kwimakethi yase China, ibizwa ngokuba ziihempe zenkcubeko, kuba limela uhlobo oluthile lwenkcubeko ngokusebenzisa ushicilelo olwahlukileyo uyilo.
“Ukuba uyayitshintsha indlela ojonga ngayo izinto. Izinto ozijongayo ziyatshintsha ”
Ngexesha labo badibana nalo myalezo sabelana ngawo kwaye sijolise ekuqhubekeni nohambo lwabo. Oku kuyafumaneka ngokudibeneyo neLebang kubantu abajolise ekuthatheni umyalezo iLebang izabelo kwaye bazimisele ukwenza oko bakufundayo ebomini babo ukuya kwinqanaba eliphezulu.
Sijonge ukutshintsha ingqondo yomntu omnye ngosuku ngokuva umyalezo wethu kwaye sikhuthaze isimo sengqondo esifanelekileyo kunye nokutolikwa kobomi ngokuba nembono ebanzi kwizinto nokuqondana ngcono. Oku kubaluleke ngakumbi kwisizukulwana esincinci kuba baya kuba likamva. Kobu bomi kufuneka sibe lutshintsho esifuna ukulubona.
Umba:Ijezi ihempe PS002
Uhlobo lonikezelo: 1 Inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM
Egqithileyo Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ihempe ihempe PS001
Okulandelayo: Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ihempe ihempe PS003
2021 Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ijezi s ...
Umyili wamadoda wama-2021, oPrintiweyo kunye noDesi ...
2021 Hot-Ukuthengisa Gym Basic Sports Casit Knit ...